Israel inorerutsa coronavirus kurambidzwa kwevanhu vane 'Vaccine Passport'
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Israel inorerutsa coronavirus kurambidzwa kwevanhu vane 'Vaccine Passport'
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • Hospitality Industry • Israel Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
MaIsrael ane "Green Pass" - yakapihwa kune avo vakagamuchira mibairo miviri yemushonga kana avo vanofungidzirwa kuzvidzivirira mushure mekupora kubva kutachiona - vanozobvumidzwa kupinda munzvimbo dzeruzhinji, dzakaita semajimu nemahotera nemitambo yemitambo.
Israeri yekuzorodza COVID-19 kukiya kune vakabaiwa vanhu
Vamwe makumi mana kubva muzana yevagari vemuIsrael vakabayirwa jekiseni nepfuti imwe chete
Kabineti yeIsrael yakatamira kubvumidza zvitoro, misika yekuvhura, mamuseum uye maraibhurari kuti avhurezve svondo rinouya
Vakuru veIsrael vakagadzirirwa kuzorodza zvinorambidzwa nyika necoronavirus uye nekuunza nyowani 'Vaccine Passport' iyo inobvumidza vagari, avo vakagamuchira Covid-19 jekiseni rakapfurwa kuti riwane dzimwe nzvimbo dzeveruzhinji, nepo Mutungamiriri wenyika, VaBenjamin Netanyahu, vakati nhomba iyi inogona kupa zvirango zvisina basa.
Israel COVID-19 kabhineti yakabvumidza kurerutswa kwemaitiro ekumisa mushure memusangano nemusi weMuvhuro manheru, hofisi yaNetanyahu yakati muchirevo, ichiisa Israel munzira yekupinda "chikamu chechipiri" yehurongwa hwekubuda kwe Ministry yehutano Svondo ino.
Nedzimwe makumi mana nematatu muzana yevagari vemuIsrael vakagonyerwa pfuti imwe chete yejabhi yakagadzirwa naPfizer neBioNTech, dare remakurukota rakatendera kubvumidza zvitoro, misika yekuvhura, mamuseum uye maraibhurari kuvhurwa svondo rinouya, zvishoma nezvishoma zvichidzora ganho repamakakatanwa rakaunzwa munguva pfupi yapfuura. Zvita.
Zvakare kutanga nemusi weSvondo, veIsrael vane "Green Pass" - yakapihwa kune avo vakagamuchira mibairo miviri yekudzivirira kana vanofungidzirwa kuzvidzivirira mushure mekupora kubva kuhutachiona - vanozobvumidzwa kupinda munzvimbo dzeruzhinji, dzakaita semajimu uye mahotera uye zviitiko zvemitambo. Iyo yekupfuura inogona kuratidzwa kuburikidza nefoni app.
Muhurukuro neChannel yeIsrael 12 Nhau neMuvhuro, Netanyahu akataura zvine tariro pamusoro penzira yenyika iyi pakati pechirwere ichi, achiti vagari mazana mashanu nemakumi manomwe ezviuru vanopfuura makore makumi mashanu vanogona kuita kuti kuvharirwa kweIsrael kuve kwekupedzisira dai vaizowana mushonga.
"Tinoda kuedza kukuru… kubaya vanhu ava mazana mashanu nemakumi manomwe ezviuru," akadaro Prime Minister, achiwedzera "Kana vabaiwa majekiseni, hapazovi nekudiwa kwekukiya."
Netanyahu, uyo atarisana nemwedzi yakawanda yekuratidzira pamusoro penzira dzekukiya, akarumbidzawo danho redare remakurukota rekutanga kuvhurwa se "inhau dzakanaka," achitora chikwereti cheGreen Pass chirongwa.
"Dare remakurukota rakabvumidza pasipoti yangu yakasvibira [hurongwa]," akadaro. "Mumatanho maviri… vanhu vane mapasipoti akasvibira vachakwanisa kuenda kumabhaisikopo, kumitambo yenhabvu neyebhasikiti - uye gare gare kumaresitorendi nekumwe ndege - uye avo vasina kubaisa nhomba havazokwanisi."
Chikamu chinotevera chekuvhurwa chakatemerwa Kurume 7, sekutaura kwaNetanyahu, apo maresitorendi madiki nemakamuri anobvumidzwa kutangazve mashandiro, pamwe nekuungana kushoma kwevanhu. Avo vane Green Passes vanozobvumidzwa kudya kunze senguva dzose uye kutangazve "chiitiko chakazara" mumahotera, dzimba dzezviitiko uye dzimwe nzvimbo dzeveruzhinji.
Kusvika pari zvino, Israel yakatora zvinopfuura mazana manomwe nemakumi manomwe ezviuru zvehutachiona hwecoronavirus uye vamwe vakafa mazana mashanu nemakumi mana, maererano nedata rakanyorwa naJohns Hopkins University. Ive ichangobva kuona kudonha muvhareji yayo yevhiki nevhiki yezviitiko zvitsva, ichidonha kubva pamusoro pe730,000 svondo rapfuura ichienda kunosvika mazana mana nemazana matanhatu senge yakapfuura Svondo.